2021: Gobolka Galbeedka ayaa diyaar u noqon doona maalintaas - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS 2021: Gobolka Galbeedka ayaa diyaar u noqon doona maalintaas
2021: Gobolka Galbeedka ayaa diyaar u noqon doona maalintaas
Work horumar fiican u eego Stadium Omnisports ku Bafoussam, lifaaqyada garoomada iyo goobaha hotel diiwaan jiidashada lagu jiro 2021 Can ah.
Dhammaantood waxay noqon doonaan kuwo shaqeynaya sababtoo ah waa tartan aad u weyn oo loogu talagalay gobolkani oo lagu doortay qaaradda Africa Cup of Nations (CAN) oo lagu qabanayo 2021. Dhismayaasha kala duwan waxay yeelan doonaan inay soo jiidato soo jiidashada ugu weyn ee dalxiisayaasha kuwaas oo sidoo kale ogaan doona naqshadeynta beerta. In ka badan seddex bilood, mashaariicda dhismaha iyo dayactirka kala duwan ee isboortiska, hudheelka, waddooyinka iyo isbitaallada ayaa kordhay.
Dhab ahaan, garoonka Omnisports Stadium ee Bafusamam oo ku yaal degmada Koukong wuxuu diyaar u yahay awoodda 20 kun kursi. Garoomada banaan ee isku magaalada iyo cutubyada kale ayaa si tartiib ah u muujinaya wajiyadooda. Professor Narcisse Mouelle Nkombi ayaa dhawaan booqday goobo kala duwan oo dhismaha magaalada ah si loo arko sida ay u kobciyeen oo ay ku soo laabteen.
Ku saabsan heerka fulinta heerarka kala duwan ee Mbouda ah diyaar u yahay inuu 51%, Bandjoun si 60%, Bamenzi si 63% iyo 52% for Bafoussam OMNISPORT Toket stadium.
Waayo, jidadka magaalooyinka Wasiirka Guryeynta iyo Urban Development (Minhdu), Celestine-Courtes Ketcha at fadhiga dhanyahay ee Golaha Qaranka on April 5 ayaa u balan qaaday baarlamaanka horumarka shaqada. Hotelka Bangou iyo Bana ayaa horay u shaqayn jiray, ayaa la doortay, waddooyinka kala duwan ee waddooyinka kala duwan ayaa hadda socda. Qaybaha baarkinka ee 10 200 ayaa sidoo kale ku jira dhismaha.
Natiijada A qanci karo in gobolka this iyo yididiilo leh, maxaa yeelay, by 2021 u baahan doonaa in dhammaan mashaariicda sameeyo gayiga ay diyaar u yihiin oo waxay u dhiibeen inay kubad weyn ee kubada cagta Afrika.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/14/can-2021-la-region-de-louest-sera-prete-le-jour-dit/